Maitiro ekuchengeta nharembozha pane iyo iPhone: usapererwe nema megabytes | IPhone nhau
Maitiro ekuchengeta nharembozha pa iPhone
Tiri munguva apo kutaurirana kwakawanda Izvo zvinoitwa kuburikidza nemeseji, kungave kuburikidza neemail kana kunyanya kutumira mameseji kunyorera. Uye zvakare, nzira dzinonyanya kushandiswa kuziviswa dzave enetwork kuwedzera kune YouTube. Kune izvi, isu tinofanirwa kuwedzera kuti mazhinji enguva dzedu dzekuzorora dzinoenda kuburikidza nekushambadzira vhidhiyo.
Kupfupisa: hatigone kurarama tisina internet. Kana iwe uchiwanzoshandisa iyo rese data kupera kwemwedzi, chinhu chakanakisa chaungaite chengetedza yakanaka yezuva nezuva yekushandisa nharembozha yekushandisa kuidzikisa kusvika pakakwirira kana kushandura kune chiyero chaunogona kufukidza chako chinongedzo . Adamo, fiber uye telephony opareta, ine dzakasiyana siyana mamwe mafoni epamhepo anobata izvo zvinosanganisira 9GB, 23GB kana 50GB.
1 Sevha data pa iPhone
1.1 Deredza WhatsApp yekushandisa data
1.2 Facebook: Deredza kushandiswa kwedata
1.3 Instagram: Deredza kushandiswa kwedata
1.4 Deredza hunhu hweYouTube mavhidhiyo
1.5 Twitter: Deredza kunaka kwemavhidhiyo nemifananidzo
1.6 Shandisa Chrome
1.7 Tarisa kuti ndeapi mafomu anoshandisa iro rakawanda data
1.8 Sevha nharembozha paTikTok
1.9 Email kunyorera
Sevha data pa iPhone
Deredza WhatsApp yekushandisa data
WhatsApp rave iro rinoshandiswa zvakanyanya kushandiswa pasirese kugovana chero mhando yezvinyorwa, nemavhidhiyo ari mamwe emafomati anozivikanwa papuratifomu, pamwe chete nemifananidzo, kunyangwe meseji yezwi yakave yakasarudzika mumakore apfuura
Mukati meiyo WhatsApp yekumisikidza sarudzo, tinogona kusimbisa kuti ndeipi mhando yedhata yatinoda anotorwa pasi otomatiki mune yedu terminal sezvatinogamuchira ivo: mafoto, audios, mavhidhiyo uye zvinyorwa.
Kana tichida chengetedza dataZvakanaka, seta otomatiki kurodha ku KweteNeiyi nzira, isu tichava ivo vanozotora izvo zvirimo kana isu tichifarira, kana isu tichifarira panguva yakapihwa, kwatisina hukama hweWi-Fi.
Kunge iOS, inotipawo iyo akaverenga data, pakaunda iyo inotibvumidza isu kuziva iyo data yekushandisa kwemessage, mafaera uye kunyangwe mafoni isu atinoita kuburikidza nekushandisa.
Facebook: Deredza kushandiswa kwedata
Facebook, imwe yemasocial network ayo yakawanda data inoshandisa (kwete kutaura zvakanyanya) inotibvumidza kuti tione kana tichida kuti kuburitswa kwemavhidhiyo anoratidzwa papuratifomu kuitwe otomatiki kana chete kana isu takabatana neWi-fi network kana nefoni data uye Wi- Fi.
Izvi zvinotibvumira kuti tigadzirise kushandiswa kwedata kwepuratifomu iyi kuitira kuti pakutanga shanduko, hatisi kupera data, kunyanya kana tikashandisa nguva zhinji chikuva ichi. Natively, Facebook inosimbisa kuti mavhidhiyo anotambiswa otomatiki achishandisa nharembozha uye kubatana kweWi-Fi.
Para dzinga autoplay kana kuti mavhidhiyo anongotambwa kana isu takabatana neWi-Fi network, isu tinofanirwa kuita anotevera matanho:
Isu tinopinda iyo zvisarudzo yeFacebook kuburikidza nemitsara mitatu yakatwasuka iri mukona yezasi yekurudyi.
Tevere, tinoenda kuchikamu Multimedia zvemukati uye vanobata uye tinya pa Mavhidhiyo uye mafoto.
Mukati meichi chikamu, muchikamu Kuisa vhidhiyo, tinya otomatiki kutamba uye sarudza patinoda kuti mavhidhiyo atorwe.
Instagram: Deredza kushandiswa kwedata
Kuve Instagram, pasocial network yakanangana nemifananidzo (kunyange mavhidhiyo aripowo kuburikidza neGTV), zvishandiso izvo chishandiso ichi chinotipa isu deredza nharembozha yekushandisa idiki.
Sarudzo iyo inotibvumidza kudzikisa kudyiwa kwefoni data pa Instagram, tinoiwana iri Zvirongwa - Akaunti - Nharembozha kushandiswa. Muchikamu chino, isu tinongofanirwa kushandura switch inoratidzwa. Kubva panguva ino zvichienda mberi, mufananidzo uchave wakatsikirirwa paserura, saka zvinotora nguva yakareba kuti uratidzwe.
Deredza hunhu hweYouTube mavhidhiyo
Kunyangwe iyo skrini ye iPhone iyo Apple yakatangisa mumakore achangopfuura yakanaka kwazvo, chishandiso ichi hachina kukodzera Nakidzwa nemavhidhiyo eYouTube mune yakanakisa mhando. Kuti tiite izvi, chinhu chakanakisa chichagara chiri komputa kana, zvikakundikana izvo, iyo iPad (yakakura saizi saizi), saka isu tinofanirwa kushandura yemuno YouTube yekutamba mhando kana tisingade kuti rate yedu ive pane akati wandei mavhidhiyo. kupera.
YouTube inotibvumidza kumisikidza iko kunyorera kuti mavhidhiyo chete anogadzirwa muH HD mhando chete patinenge takabatana ne Wi-Fi network. Kuti tigadzirise izvi, tinofanirwa kuwana marongero ekushandisa uye nekumisikidza iyo View muHD switch (Wi-Fi chete). Kubva panguva ino zvichienda mberi, mavhidhiyo ese atinoona nefoni data anozoratidzwa mu480p mhando uye kwete muHD (720p).
Twitter: Deredza kunaka kwemavhidhiyo nemifananidzo
Kunyangwe Twitter haisi chikuva chevhidhiyo, zviri kuwedzera zvakajairika kuwana izvi zvemukati zvemukati, zvemukati izvo, zvinoenderana nerudzi rweakaundi yatinotevera, inogona kukurumidza kupedza mwero wedu. Nekuti deredza kushandiswa kwedata kubva kumavhidhiyo izvo zvakatumirwa paTwitter, isu tinofanirwa kuita nhanho dzandinonyora pazasi:
Isu tinopinda iyo marongero kubva kuTwitter
Mukati meZvirongwa, tinya pa Kushandiswa kwedata.
Mukushandisa kweData, isu tinomutsa bhokisi Sevha data kuitira kuti mavhidhiyo arege kutamba otomatiki uye mapikicha akaiswa mune yakaderera mhando.
Kana iwe uchigara uchishandisa Google services, iwe ungangodaro unoshandisa Chrome. Iri bhurawuza rinobatanidza basa rinotibvumira kusevha data mune yedu yekufambisa inonzi Ancho de banda.
Iri basa rinotibvumidza chengetedza data panguva yekufamba kwedu tichishandisa nharembozha sekureba sekunge isu tamboimisikidza kuburikidza neBandwidth basa, inowanikwa munzvimbo dzekushandisa.
Tarisa kuti ndeapi mafomu anoshandisa iro rakawanda data
Kana isu tisinganzwisise nezve mafomu ayo akatsaurirwa pedza yedu data rate, zvakanakisa zvatingaite kudzikisa dambudziko mubhu uye titore matanho (zvinoenderana nechishandiso icho ichi) tarisa iyo data yakashandiswa neshoko.
iOS natively, inotipa data inopikisa nemaapplication muzvirongwa zvehurongwa. Kunyanya mukati meZvirevo - Nharembozha. Ichi chikamu chinoratidza zita rezvishandiso pamwe chete nedhata rakashandiswa nechishandiso kubvira patakagadzirisa system counter, kaunda iri kumagumo kwechikamu chimwe chete ichi.
Nekugadzirisa patsva izvi nguva dzese patinotanga yedu chiyero kubva kune zero, tinogona kuziva zviri nyore iwo mafomu ayo anodya zvakanyanya data uye tora matanho. Zvinotyisa pane zvese, zvinoitika nekusabvumidza maapplication aya kuwana mukana weinternet. Sei? Isu tinongofanirwa kudzima switch inoenderana kune yega yega.
Sevha nharembozha paTikTok
Kunyangwe TikTok iri pasocial network ipapo mavhidhiyo chete ndiwo anoratidzwa, inotipawo sarudzo yekuchengetedza data nekudzora mhando yevhidhiyo inoratidzwa, sarudzo inowanikwa mukati meiyo Dhata Yekushandisa sarudzo.
Dambudziko nderekuti chishandiso ichi chinoratidza mavhidhiyo, uye kunyangwe hazvo vachideredza saizi yavo, vachiri mavhidhiyo, saka mwero wedu unogona kutambura zviri nyore, kunyanya kana tikapinda mumhepo yekuona imwe vhidhiyo mushure meimwe sekunge pakange pasisina mangwana nekuda kwekupindwa muropa kwazvo.
Kana tikashandisa Gmail kutarisa tsamba, tinofanirwa kuziva kuti kutarisa inbox, iwe unofanirwa kubatanidza hongu kana hongu kune internet, saka iko kushandiswa kwedata kwazvinoita kunoenderera. Mhinduro inonakidza kwazvo ndeyekushandisa yechitatu-bato kunyorera senge Outlook.
Outlook inotibvumidza kurodha maemail kune yedu kifaa uye kutibvunza isu pasina internet kubatana, asi zvakare, inotibvumidzawo bvisa mifananidzo inosangana nemaemail, Mifananidzo iri pamaseva uye iyo muzviitiko zvakawanda, inoshandiswa kuziva kana mumwe munhu akaverenga email (tevera isu), saka zvakare inonakidza sarudzo yekudzivirira kuteverwa, kwete chete kuchengetedza data renhare.
Iyi sarudzo inowanikwa mukati me account sarudzo iyo yatinogona kumisikidza muAptlook (Outlook, Gmail, iCloud, Yahoo ...).
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Maitiro ekuchengeta nharembozha pa iPhone
Wona chiitiko chako chemuviri mune widget ine MyPedometerApp, yemahara kwenguva shoma
Iyo iPhone 12 mini inogona kumiswa muna Kubvumbi